Filtrer les éléments par date : mercredi, 04 mars 2020
mercredi, 04 mars 2020 22:28
Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena Ambositra: Vehivavy ny 131 amin’ireo 1200 mandrafitra ny andiany faha-75
Nambara ofisialy omaly 03 martsa 2020 tao amin’ny Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena Ambositra, ny valin'ny fifaninanana fidirana andiany faha-75 ho mpianatra zandary.
Nitarika izany ny jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka, Komandin'ny Zandarimariam-pirenena, notronin'ireo tomponandraikitra ambony eo anivon'ny Zandarimaria.
Miisa 1200 no noraisina ka 1069 lehilahy ary 131 ny vehivavy. Nanomboka avy hatrany ny fiofanan'ireo tafiditra ka handritra ny 12 volana izany.
mercredi, 04 mars 2020 21:47
Kitra – « Coupe Arabe U20 »: Lasan’i Sénégal ny amboara
Lavon’ny Sénégal tamin’ny isa 1 no 0 i Tonizia, tamin’ny lalao famaranana ny « Coupe Arabe U20 » tany Arabia Saodita, androany, baolina matin’i Samba Diallo. Lasan’i Sénégal ny amboara, i Sénégal izay sambany nandray anjara tamin’ity fifaninanana iraisam-pirenena ity.
Niisa 16 ireo ekipam-pirenena nandray anjara tamin’ity « Coupe Arabe U20 » ity, anisany ny Barea an’i Madagasikara. Tsy nahadingana ny fifanintsanam-bondrona ny Barea tamin’ireo lalao telo vitany, nahazoany fandresena iray nanoloana an’i Djibouti, ary faharesena roa nanoloana an’i Maroc sy Bahreïn.
mercredi, 04 mars 2020 20:30
Hopitalin’ny Reny sy zaza Tsaralalàna: Notokanana ny Trano Sakaizan'ny Vaksiny
Notokanana androany 04 martsa 2020 ny Trano Sakaizan'ny Vaksiny, na ny « Centre Ami de la Vaccination » eo anivon’ny hopitalin’ny Reny sy zaza Tsaralalàna-Antananarivo, izay vao avy nohavaozina. Hanampy amin'ny fanatsaràna ny tolotra fanaovam-baksiny izay omen’ny hopitaly ho an’ny Malagasy ary hampitombo ny taham-panaovam-baksiny ny fanavaozana ity trano ity.
Fiarahamiasan'ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Fikambanambe iraisam-pirenena misahana ny Fahasalamana (OMS) ary ny Fikambanana FITIA no nahavitana izao fotodrafitrasa sy fampitaovana izao.
Tonga nanotrona sy nitokana izany Rtoa Mialy Rajoelina, vadin’ny Filoham-pirenena sady Filohan' ny Fikambanana FITIA ary Reny mpiahy ny fahasalamàn'ny Reny sy ny Zaza malagasy.
mercredi, 04 mars 2020 20:13
Razanamahasoa Christine: « Tolo-dalàna miisa dimy no mikatso any amin’ny Antenimierandoholona »
Nisokatra ofisialy androany ny fivoriana tsy ara-potoana ny Antenimiera roa tonta. Teny Tsimbazaza dia nanisy tsindrim-peo manokana mahakasika izay fanajàna ny lalàna, ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine tamin’ny lahateny fanokafana nataony.
Nambarany fa « adidin’ny Andrimpanjakàna tsirairay ny manaja ny lalàna velona eto amin’ny firenena. Tokony ho loha laharana amin’izany ny Andrimpanjakàna mpanao lalàna ». Misy anefa ny indro kely tsara hampahatsiahivina ary anisan’ny mampikatso izay asa fanaovan-dalàna eto Madagasikara amin’izao fotoana izao, hoy Razanamahasoa Christine. Fihetsika izay mifanohitra amin’ny Andininy faha-96 ny Lalàmpanorenana, izay mandidy ny Antenimiera roa tonta hanefa ny fifezivezena (navette) amin’ireo tolo-dalàna na volavolan-dalàna dinihin’izy ireo avy.
mercredi, 04 mars 2020 20:01
Antenimierandoholona: Nesorina avokoa ny basy na ny tao amin’ny « Magasin d’armes » na ny teny amin’ireo mpiambina
Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny Antenimierandoholona dia «Araka ny baiko nomen’ny lehiben’ny Etamazaoro Jeneralin’ny Tafika Malagasy na CEMGAM io hariva io dia nalaina daholo ny fitaovam-piadiana rehetra tao amin’ny Antenimierandoholona, na ny tao amin’ny « Magasin d’armes » izany na ny teny amin’ny mpitandro filaminana rehetra isambatan’olona. Voakasik’izany ihany koa ny an’ireo mpiambina manokana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao, na ireo mpanaraka azy izany na ireo mpiambina ny trano fonenany ».
Andrimpanjakanan’ny Repoblika ny Antenimierandoholona, misy ny fepetra ara-piarovana voafaritry ny lalàna mifanaraka amin’izany. Mampametra-panontaniana ny tranga toy izao, hoy hatrany ny loharanom-baovao satria miendrika fanonganana ny lehiben’io andrimpanjakana io izao toe-javatra mitranga izao.
mercredi, 04 mars 2020 19:29
Madagasikara: 12% ny Malagasy no manana kaonty amin’ny Banky
12% ny Malagasy no manana kaonty amin’ny Banky, mametraka an’i Madagasikara eo amin’ny laharana faha-13 amin’ireo firenena mikambana eo anivon’ny SADC, raha toa ka 94% ao Seychelles ary 85% atsy Maorisy.
Mametraka tanjona i Madagasikara mba ho 45% ny Malagasy no manana kaonty amin’ny Banky hatramin’ny taona 2022.
Manoloana ny fivoaran’ny teknôlôjia indray anefa dia manodidina ny 10 tapitrisa ankehitriny ny Malagasy mampiasa ireny « Mobile Money » na fandefasana sy fandraisana ary fampirimana vola amin’ny finday ireny amin’ireo toeram-panakalozana miisa 40 000 eo tato anatin’ny 10 taona.
Kianja Stadium - Toamasina: Manana 10 andro hanarenana ny lesoka raha te hampiantrano ny lalaon’ny Barea sy Côte d’Ivoire
Tonga teto Toamasina, androany alarobia 4 martsa 2020, ny solontenan’ny Kaonfederasiona Afrikana momba ny baolina kitra na ny CAF, nijery ny ho fanomezana fahazoan-dalana ny ahafahan'ny Stadium Mangarano mandray lalao iraisam-pirenena, eo amin'ny lalao miverina hifanandrinan’ny Barea an’i Madagasikara sy ny Elefantan’i Côte d'Ivoire ny 31 marsa 2020.
Tsy nahafa-po azy ireo ny zavatra hitany ka nomena folo andro ny eto Toamasina hanarenana izany raha te hahazo ny lalao i Toamasina, isan'izany ny fanesorana ireo mpivarotra eo am-pidirana ny Stadium. Kendrena hafindra ao Mangarano II izy ireo, ny efa ao an-toerana anefa mitaraina amin'ny tsy filaminana.
mercredi, 04 mars 2020 17:19
Tolagnaro: Nanolotra fanampiana ho an’ireo vehivavy voafonja ny « Vehivavy 8 Marsa »
Miisa 15 ireo vehivavy voafonja ao amin’ny fonjaben’i Tolagnaro. Nanatitra fanampiana ho azy ireo ny « Vehivavy 8 Marsa » ka androany alarobia 4 martsa maraina ny solontena no nanatira izany teny an-toerana.
Nahitana lamba, savony, vary, poketra, tatinono, menabolo ny fanomezana, izay voaangona nandritra ny hetsika « Hanampy ny Hafa Aho ».
Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny 8 martsa, Andro manerantany ho an’ny Vehivavy ity hetsika nataon’ny fikambanana « Vehivavy 8 Marsa » teto Tolagnaro ity.
mercredi, 04 mars 2020 16:42
Lavanty fananan'i Claudine: Mifangaro ny akoho sy ny vorona
Ity izao ilay nazavaiko hoe samihafa ny personne morale, A&C izy eto, sy ny personne physique (Razaimamonjy Claudine eto).
Raha hiverenana ny soratra eo amin'ny lavanty dia hoe "Aux préjudices de Mme RAZAIMAMONJY Claudine Marie Odette, en détention à Antanimora", izany hoe fananan'i Claudine manokana madiodio (personne physique) izany no resaka eto. Hatreto aloha tsy misy nahita inona ny didim-pitsarana napàka ireo entana ireo, fa andao atao hoe nisy, satria izay taratasy izay no tsy maintsy naseho ny forces tamin'ny requisitions nakana azy ireo hiaraka amin'ny vaditany anatateraka ilay fakana entana.
Raha nisy didim-pitsarana dia mazava fa didy efa tsy azo ivalozana ka tapitra daholo ny voie de recours rehetra izany, raha tsy hoe donendrina tsy nanao appel i Claudine sy ny fianakaviany.
mercredi, 04 mars 2020 15:47
Savorovoro manodidina ny lisi-pifidianana: Nitondra fanazavana mba hampitony ny besinimaro ny CENI
Niverina haingana an-tanindrazana ny filohan’ny CENI, Me Hery Rakotomanana, raha tokony ho rahampitso 5 martsa no hiverina raha namita iraka fanaraha-maso fifidianana filoham-pirenena tany Guinée. Izy no nitarika ireo mpikambana ao amin’ny CENI, nitondra fanazavana sy miangavy ny rehetra mba ho tony, hamakafaka fa tsy hihinana amam-bolony manoloana ny savorovoro manodidina ny lisi-pifidianana.